रूसी सत्य प्राचीन रस मा व्यवस्था को पहिलो संग्रह थियो। यसको पहिलो संस्करण XI शताब्दीको पहिलो आधा मा कीव Yaroslava Mudrogo को राजकुमार को शासनकालमा देखियो। उहाँले रूसी Pravda, को initiator थियो। संग्रह जहाँ त्यहाँ अझै पनि न्याय र विवाद अलिखित परम्पराको हल गर्दै जीवन एक देशमा व्यवस्था गर्न आवश्यक थियो। ती सबै कागजातहरू यस संग्रह को पृष्ठ प्रतिबिम्बित गर्दै हुनुहुन्छ।
रूसी सत्यको संक्षिप्त विवरण यो, सामाजिक कानुनी र आर्थिक सम्बन्ध लागि प्रक्रिया stipulates भनेर भन्छन्। साथै, संग्रह स्तर कानून (उत्तराधिकार, आपराधिक, प्रक्रियागत र व्यावसायिक) को धेरै प्रकार छन्।
राख्नु भएको थियो जो को मुख्य उद्देश्य Yaroslav Mudry संकलनमा - रूसी सत्य अन्तर्गत जनसंख्याको कानुनी स्थिति निर्धारण छ। codified नियम को उद्भव सबै मध्ययुगीन युरोपेली समाजमा गर्न साधारण छन्। त्यसैले समान को Frankish राज्य "Salic व्यवस्था" मा थियो। आफ्नो विधान पुस्तकहरू पनि बर्बर उत्तरी अमेरिका र ब्रिटिश द्वीपहरु देखियो। मात्र फरक (को छठी सताब्दी देखि सुरु) पश्चिमी युरोप मा, यी कागजात धेरै शताब्दीअघि सिर्जना भन्ने तथ्यलाई मा निहित। यो रूस पछि feudal क्याथोलिक अमेरिका देखा भन्ने तथ्यलाई जडान गरिएको थियो। तसर्थ, पूर्वी Slavs मा कानुनी मान्यता सिर्जना केही शताब्दीपछि पछि भयो।
रूसी सत्य सिर्जना
पुरातन सत्य वा सत्य Yaroslav, 1016 मा देखा अन्ततः कीव मा स्थापित भएको थियो जब। तथापि, यो कागजात कि राजकुमार आफ्नो शासनकालको थाले कहाँ छ देखि, राजधानी को दक्षिण लागि, र नोभगोरोड लागि अभिप्रेरित थियो। यो संस्करण मा मुख्य रूप विभिन्न आपराधिक लेख समावेश छन्। तर यो 18 लेख को यो सूची रूसी Pravda, सिर्जना थाले छ।
पुस्तकको दोस्रो भाग केही वर्ष प्रकाशित भएको थियो। यो सत्य Yaroslav (महान् ड्यूक को बच्चाहरु) भनिन्छ र राज्य को बासिन्दा बीच कानुनी सम्बन्ध हुर्केका थिए। को 30 सेकेन्ड मा virnikov खुवाउने मा लेख थिए। यी टुक्रा छोटो संस्करण अवस्थित।
तर, संग्रह पूरक र Yaroslav को मृत्यु पछि थियो। रूसी सत्य सिर्जना आफ्नो नाति व्लादिमीर Monomakh, छोटकरीमा (feudal खण्डीकरणको क्रमलाई को युग आउँदै) को fiefdoms एकजुट र यसको चार्टर समाप्त गर्न व्यवस्थित गर्ने संग जारी राखे। उहाँले एक लामो सम्पादकीय सत्य गए। व्यापक संशोधन सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी को विवाद प्रभावित। यो कारणले गर्दा रूस मा व्यापार र मौद्रिक सम्बन्ध बढाउन भन्ने तथ्यलाई थियो।
रूसी Pravda, को मूल प्रतिहरू को संरक्षित गरिएको छ कि यो ज्ञात छ। घरेलु इतिहास लेखन तिनीहरूले पत्ता गर्दा पछि प्रतिहरू पत्ता र अध्ययन Vasily Tatishchev। सूची को पुराना प्रतिलिपि पहिलो नोभगोरोड क्रनिकल XI शताब्दीमा राखिएको मानिन्छ। यो अनुसन्धानकर्ताहरूले लागि जानकारी को स्रोत भयो।
पछि, XV शताब्दीमा सम्म सिर्जना प्रतिहरू र सूची पाइएको छ। ती fragments विभिन्न Kormchaia मा प्रयोग गरिन्छ। साँचो रूसी को XV शताब्दीको अन्त्यमा उत्पादन Sudebnik इवान III सान्दर्भिक भएनन्।
विस्तृत अपराध लागि जिम्मेवार व्यक्ति रूसी Pravda, समावेश गर्ने पृष्ठहरूमा प्रतिबिम्बित। लेख जानिजानि र नगरिएका अपराध भिन्नता समाधान। पनि कमजोर र भारी क्षति साझेदारी। यो उपाय सजायको के डिग्री को offender सुनाइसकेको गरिनेछ निर्णय गर्न को लागि।
Slavs अझै पनि अभ्यास गर्दै एकै समयमा प्रतिशोध, यसको बारेमा रूसी Pravda, कुरा छ। लेख एक व्यक्ति आफ्नो बुबा, भाइ, छोरा को हत्यारा दण्ड गर्ने अधिकार छ, र यति मा। डी नातेदार त्यसो गरे भने, राज्य आपराधिक टाउको लागि 40 रिव्निया को एक इनाम घोषणा गरेको छ कि दाबी। यी शताब्दीयौंदेखि अस्तित्व जो पुरानो शासन, को प्रतिध्वनिहरु थिए। यो रूस पहिले नै बप्तिस्मा गरिएको छ भनेर याद महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यहाँ अझै पनि मूर्तिपूजक bloodthirsty युग को remnants अवस्थित।
पेनाल्टी को प्रकार
आपराधिक व्यवस्था पनि जरिवाना समावेश छ। को Slavs, तिनीहरूले viroy भनिन्थ्यो। जरिवाना स्कैंडिनेवियाई अधिकार बाट रूस आए। यसलाई अन्ततः पूर्ण अपराध को सजाय को एक उपाय रूपमा प्रतिशोध प्रतिस्थापित Veera। यो मानिसको आचरण र अपमान को गुरुत्वाकर्षण आधारमा, फरक तरिकामा मापन गरिएको छ। Vira को रूसी एनालग रगत पैसा थियो। यो एक मौद्रिक दण्ड, को Germanic कुल प्राचीन Germanic व्यवस्थामा निर्धारित थियो।
Yaroslav viroy अन्तर्गत मात्र निःशुल्क मानिस थिए जो एक मानिसको हत्या लागि दण्ड भनिन्छ (छ, दास छैन)। एक किसान को लागि राम्रो 40 रिव्निया थियो। पीडित राजकुमार को सेवा मा थियो मानिसलाई, हो भने, दण्ड दुगुना छ।
निःशुल्क मानिस कारण गंभीर चोट वा महिला मृत्यु भएको थियो भने, offender poluvire भुक्तानी गर्न भएको थियो। 20 रिव्निया गर्न - कि, आधा गिरा मूल्य छ। यस्तो चोरी रूपमा कम गम्भीर अपराध, एउटा सानो राम्रो, अदालत द्वारा व्यक्तिगत निर्धारण गरिन्छ जो punishable।
त्यसपछि रूसी आपराधिक व्यवस्था परिभाषा golovnichestva देखियो। यो हत्यारा मृतक को परिवार प्रदान गर्न भएको थियो कि फिरौतीको थियो। आकार सिकार स्थिति द्वारा निर्धारित थियो। त्यसैले, एक अतिरिक्त असल परिवार दास मात्र5रिव्निया थियो।
Pillage - एक रूसी सत्य शुरू भएको छ जो सजाय को अर्को रूप। अपराधी Expulsion को सजाय गर्न राज्य को सही offender र complemented सम्पत्ति को जफत। साथै, यो एक दास पठाउन सकिएन। यस मामला मा, सम्पत्ति (यसैले नाम) looted थियो। सजाय उमेर आधारमा अंतर रहन्थ्यो। र plunder चोरी वा जलाना दोषी प्रबन्ध। यो सबैभन्दा गम्भीर अपराध थियो विश्वास थियो।
समाज धेरै भागमा विभाजन गरिएको थियो। आफ्नो मा पूर्ण निर्भर रूसी सत्य अन्तर्गत जनसंख्याको कानुनी स्थिति सामाजिक स्थिति। उच्चतम stratum थाहा मानिन्थ्यो। यसलाई राजकुमार र आफ्नो वरिष्ठ retainers (boyars) थियो। सुरुमा तिनीहरू बोकेका शक्ति छन् जो व्यावसायिक सिपाही थिए। त्यो राजकुमार को नाम अदालत धारण छ। पनि गर्न अपराधको लागि सबै पेनाल्टी थिए। को अगुवाहरू र boyars (Tiunov र ognischane) को सेवकहरू पनि समाजमा एउटा सुअवसर स्थिति थियो।
निःशुल्क मानिसहरूको अर्को चरणमा थिए। रूसी Pravda, यो स्थिति लागि विशेष अवधि थियो। यो शब्द "पति" गर्न पत्राचार। मुक्त व्यक्ति साना vigilantes, जरिवाना को संग्रहकर्ता, साथै नोभगोरोड भूमि वसोवास छन्।
समाज को निर्भर क्षेत्रहरु
सबैभन्दा खराब रूसी सत्य अन्तर्गत जनसंख्याको कानुनी स्थिति निर्भर मान्छे थियो छ। तिनीहरूले धेरै भागमा विभाजन गरेका थिए। Smerdy को Boyar काम निर्भर किसान थिए (तर आफ्नो जमीन जायदाद संग)। आजीवन दास दास भनिन्थ्यो। तिनीहरूले कुनै सम्पत्ति थियो।
एक व्यक्ति ऋण मा लिए र भुक्तानी गर्न समय छैन भने, त्यो दासत्व को एक विशेष फारममा आफूलाई फेला परेन। यो खरिद भनिन्थ्यो। यस्तो निर्भरता रूपमा लामो यो यसको ऋण चुक्ता रूपमा उधारकर्ता को सम्पत्ति बन्नेछ।
रूसी स्थिति सत्य बताउन र नम्बर एक यस्तो सन्धि मा छ। निर्भर मान्छे स्वेच्छाले प्रभु सेवा गर्न गए जो अन्तर्गत एउटा सम्झौता को शीर्षक थियो। तिनीहरूले ryadovichami भनिन्थ्यो।
नागरिक यी सबै विभाग सामाजिक सीढी को धेरै तल थियो। रूसी सत्य अन्तर्गत जनसंख्याको यस्तो कानुनी स्थिति लगभग जीवन, शब्द को शाब्दिक अर्थमा निर्भर devalues। यी मानिसहरू हत्या लागि पेनाल्टी न्यूनतम थिए।
निष्कर्षमा हामी रूस मा समाज पश्चिमी युरोप मा क्लासिक feudal मोडेल देखि धेरै फरक थियो भनेर भन्न सकिन्छ। क्सी शताब्दीमा क्याथोलिक देशहरूमा अग्रणी स्थिति पहिले नै ठूलो landowners, अक्सर पनि केन्द्रीय अख्तियार ध्यान नगर्ने कब्जा। रूस मा यो फरक थियो। को Slavs को टिप बहुमूल्य र अमूल्य स्रोतहरू पहुँच थियो जो दस्ते राजकुमार थियो। रूसी सत्य अन्तर्गत जनसंख्याको कानुनी स्थिति तिनीहरूलाई राज्य सबैभन्दा शक्तिशाली मान्छे बनाउँछ। एकै समयमा, ठूलो landowners को वर्ग अझै गठन गर्ने समय थियो छैन।
अन्य कुराहरु, रूसी Pravda, Yaroslava निजी व्यवस्था मा लेख समावेश। उदाहरणका लागि, तिनीहरूले व्यापार र अर्थतन्त्रको इन्जिन थियो जो व्यापारी वर्ग, को अधिकार र विशेषाधिकार निर्दिष्ट।
व्यापारी usury मा संलग्न सक्छ, कि उधारो छ। तिनीहरूलाई मा दण्ड पनि यस्तो खाना र उत्पादनहरु रूपमा, सट्टापट्टा को रूप मा सशुल्क छ। Usury सक्रिय यहूदीहरूले संलग्न। को XII शताब्दीमा, यो विरोधी Semitism र pogroms को धेरै फैलने गर्न पुगे। यो 1113 मा, व्लादिमीर Monomakh कीव मा शासन गर्न आए, उहाँले पहिलो ऋणबाट-यहूदीहरूले समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्ने ज्ञात छ।
इतिहास जो संस्करण एक नम्बर पनि समावेश रूसी सत्य, पनि उत्तराधिकार मुद्दाहरू असर गर्छ। चार्टर मुक्त मान्छे कागज इच्छा द्वारा प्राप्त दिनुभयो।
रूसी सत्य पूर्ण कैरेक्टराइजेशन प्रक्रियागत व्यवस्था सम्बन्धी लेख सम्झना गर्न सक्दैन। आपराधिक अपराध को princely अदालत मा संग व्यवहार गर्नुभयो। उहाँले अधिकारीहरु को एक डिजाइन प्रतिनिधि व्यवस्थापन। केही अवस्थामा, एक tete-एक-tete को दुई पक्ष आफ्नो निर्दोष साबित गर्न जब टकराव गर्न resorted। पनि ऋणी देखि दण्ड रिकभरी को क्रम निर्धारित गरिएको छ।
उहाँले कुरा अनुपलब्ध भए एक व्यक्ति अदालत जाने सकेन। उदाहरणका लागि, यो अक्सर चोरी भोगे व्यापारीहरू द्वारा प्रयोग गरिएको छ। हानि को भित्र तीन दिन यो प्रदान गर्ने व्यक्ति पत्ता लगाउन सक्षम थियो भने, उहाँले अदालत मा एक प्रतिवादी भयो। उहाँले सफाइ र निर्दोष प्रमाण प्रदान गर्न भएको थियो। अन्यथा, असल भुक्तानी गर्न।
अदालत मा गवाही
साक्षी अदालतमा उपस्थित हुन सक्छन्। आफ्नो गवाही acquis भनिन्थ्यो। खोज प्रक्रिया त्यहि शब्द छुटेको छ। यो शहर वा समुदाय बाहिर कार्यवाही परिणाम भने, चोर अन्तिम संदिग्ध स्वीकारे। उहाँले आफ्नो नाम सफाइ गर्ने अधिकार थियो। यस को लागि, उहाँले एक सेट पूरा र चोरी प्रतिबद्ध व्यक्ति पाउन सक्छ। तिनी सफल गर्नुभएन भने, यो राम्रो मा superimposed छ।
साक्षी दुई प्रकार मा विभाजित थिए। Vidocq - आफ्नै आँखाले देखेको छु जो मानिसहरू अपराध (हत्या, चोरी, आदि ...) प्रतिबद्ध गर्न। Posluhi - साक्षी जो आफ्नो गवाही मा, रिपोर्ट अप्रमाणित अफवाहहरु।
तपाईं कुनै पनि फेला पार्न व्यवस्थापन भने शारीरिक प्रमाण एक अपराध, त्यसपछि अन्तिम उपाय गर्न resorted। यो एक मानिस अदालत मा, राजकुमार शक्ति, तर पनि परमेश्वरको मात्र होइन आफ्नो गवाही दिए गर्दा क्रूसमा चुम्बन गरेर शपथ थियो।
पनि परीक्षण पानी प्रयोग। प्रमाण पानी उम्लिरहेको देखि सत्य dostavaniem घन्टी लागि परीक्षण गर्दा यो परमेश्वरको न्यायको फारम थियो। को प्रतिवादी यो गर्न सक्छ भने, उहाँले दोषी फेला परेन। पश्चिमी युरोप मा, यो अभ्यास भएको अग्निपरीक्षाहरू भनिन्छ। मान्छे एक लगनशील मानिस परमेश्वरको चोट छैन भनेर लाग्यो।
प्रारम्भिक मानिसहरूलाई को धातु गरियो आभूषण प्राकृतिक मूल को थियो
Izyaslav Mstislavich, कीव को ग्रैंड राजकुमार: जीवन र शासनकालको वर्ष
Antiparasitic विहारको चिया: संरचना। Antiparasitic चिया: प्रयोग एक विधि, समीक्षा
बक्र "Mirena" Endometriosis: समीक्षा
ट्याब्लेटको "Vero loperamide": प्रयोग, analogs र समीक्षा लागि निर्देशन
2009 - कुन कुन वर्ष? बुल का वर्ष: राशिफल
कसरी पट्टियाँ सही बाँध गर्न?
को बालकनी मा फूल कस्तो रोपेर गर्न?
लागि बायोप्सी र सङ्केत गर्छ को प्रकार